यस कारण छाँयामा सर्जकहरु - अविनाश थापा
फाल्गुन ९, २०७५ मनु बिद्राेही
गजलकार अविनाश थापा
गजलकार अविनाश थापा आठ वर्षदेखि साहित्यमा कलम चलाईरहनु भएको छ ।अग्रज गजलकारहरुको गजल सुनेर र पढेर गजल विधाबाट साहित्यमा प्रवेश गर्नु भएको हो ।उहाँ सिन्धुली साहित्य प्रतिष्ठानमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।उहाँले गजल ,मुक्तक र कथा लेख्नुहुन्छ।गजल सङ्ग्रह "अधुरो सपना "(२०७२)र "अन्तिम सम्बोधन"(२०७५) संयुक्त गजल सङ्ग्रह "हैसियत -३"(२०७३)र "सिन्धुलियन चौतारी "(२०७३) प्रकाशित भैसकेको छ ।
तपाईं आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
- अचेल साहित्य सगै अन्य सञ्चार क्षेत्रका कार्यमा अलमलिएको छु भन्नु पर्ला ।।
तपाईंको विचारमा साहित्य के होर ? साहित्य सिर्जना के को निम्ति गर्नुहुन्छ ?
- साहित्य समाजको एक ऎना हो । जसमा दुख पिडा,भोगाइ,अलिकति सत्यता,अलिकति कल्पना अनि भावनाहरु समेटिएको हुन्छ । प्राय म लेखाइ त आत्मसन्तुष्टीको लागी लेख्छु । हरेक दिन काममा ब्यस्त रहदै गर्दा देखेका सुनेका र भोगेका कुराहरुलाइ नै आफ्नो सिर्जनामा उतार्ने गरेको छु ।
हाल विकास भएको सुचना प्रविधि र यसले नेपाली साहित्यलाई कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ ?
- पछिल्लो समय सुचना र प्रबिधिको बिकास भए सगै साहित्यमा लाग्ने मानिसहरुको जमात उल्लेखनिय रुपमा बढेको पाइन्छ । त्यस आधारमा हेर्ने हो भने राम्रो मान्न सकिन्छ ।तर हरेक कुराको सकरात्मक र नकरात्मक पक्ष हुन्छन र यसमा पनि छन । तर यसरी जमात बढ्दै जादा साहित्यको गुणस्तरमा भने प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ ।
पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखकको संख्यामा कमि देखिनु र पुरुष लेखक भन्दा महिला लेखक पछाडी पर्नुको मुख्य कारण के होला ?
- तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने सख्या केहि कम होला तर हामिले साहित्यलाइ संख्यात्मक रुपमा भन्दा गुणात्मक रुपमा हेर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।
कतिपयलाई मिडियाले साहित्यकार बनाइदिएको छ भन्छन् नातावाद र कृपावादको प्रभावले साहित्यलाई कस्तो असर पर्ला ?
- साहित्यमा अरुले माथी उचालेर बनेका कृतिम साहित्यकारहरु स्थायी रहदैन । जब मिडिया र केहि त्यस्ता आयोजकहरुले उनिहरुको शिरबाट हात हटाएपछी आफ्नो यथास्थानमा आइहाल्छन । वास्तवमै आज भोलि नातावाद कृपावादले नेपाली साहित्यमा जरा गाढेको छ । जसको कारण वास्तविक सर्जकहरु छाँयामा परिरहेका छन । त्यसैले यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
साहित्यलाई समाजको ऎना मानिन्छ,कस्ता कस्ता विषयवस्तुमा जोड दिने हो भने समाज परिवर्तनको लागि सहयोग पुग्ला ?
- साहित्य र समाज एक अर्कामा गहिरो सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ । साहित्यले समाजलाई निकै सहयोग पुर्यागएको छ र पुगाउनु पनि पर्छ । हामिले लेख्ने साहित्यमा आफ्नो जीवन शैली , परम्परा , संस्कृत उल्लेख भैरहेका छन । अब हामिले लेख्ने हरेक साहित्य चाहे आख्यान होस या त्यो गजल ,कबिता, मुक्तक नै हो यसमा समाजमा घटिरहेका घटनालाइ यथार्थ चित्रण गर्न सकेमा समाज परिवर्तनमा टेवा पुग्ने छ ।
साहित्यमा दिगो विकासका लागि राज्यस्तरबाट कस्तो कदम चालिदिए राहत महसुस गर्न सकिएला?
- अहिलेसम्म राज्यस्तरबाट कुनै कदम चालिएको छैन । साहित्य पनि समाज परिवर्तनको एक अङ्ग हो भनेर सोचिदिएर राम्रो हुने थियो ।।
आजभोलि नेपाली साहित्यमा आगन्तुक शब्दहरू बढी नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ यस्तो प्रवृतिले के कस्तो असर पर्न सक्छ ?
- हो एकदम नै राम्रो प्रश्न हो । पछिल्लो समयमा आएका केही आख्यान तथा गैर आख्यानका पुस्तकहरुमा आगन्तुक शब्द बढिनै प्रयोग भएको मैले पनि महशुस गरेको छु । आख्यानमा कम नै कलम चलाए पनि पछिल्लो समय आएका केही पुस्तक मा यो कुरा देखिन्छ । शब्दहरुको खेल खेल्दै गर्दा केही शब्द मिसिन जानू त्यो त स्वभाविक नै हो तर जानाजानि ती शब्दको प्रयोग गर्नु राम्रो होइन किनभने त्यसले नेपाली साहित्यको मौलिकपन लाई ह्रास ल्याउछ ।
साहित्यको प्रायःजसो सबै विधा विवादित बनेको छ यस्तो अवस्थामा साहित्य क्षेत्रमा रुचि भएकाहरुलाई र साहित्य क्षेत्रमा रुचि हुन चाहनेहरुलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
- मेरो बिचारमा यो साहित्य आफैमा बिवादित हैन ,बिवादित बनाइएको हो ।केही त्यस्ता साहित्यका ठेकेदारहरुले गरिएको दुस्कर्म मात्र हो । अब नया आउने जो साहित्यमा आउन चाहानुहुन्छ उहाँहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने यी हल्लाहरुको पछि नलागी निरन्तर कर्म गर्न सक्नुहुन्छ भने आउनुस र अन्य बिधाका तथा आफुले लेख्ने बिधा बारेमा पुस्तकहरुको अध्यन अलि बढी गर्न भने जरुरी छ ।
गजल सङ्ग्रह अन्तिम सम्बोधन भित्र केके भेटिन्छ ? केका लागि पाठकहरुले पढ्नु पर्छ ?
- गजल संग्रह अन्तिम सम्बोधन मेरो दोश्रो गजल संग्रह हो । यसमा विशेष गरि जीवन भोगाइका क्रममा उत्पन्न हुने भावनाहरुका गजलहरु संग्रहित गरेको छु । संगै पछिल्लो समयमा अत्याधिक लेखिने शृङ्गारिक गजलहरु पनि छ्न । तसर्थ पाठकले गजलमा प्रेम र जीवन खोज्नेहरुले पढ्नपर्छ जस्तो लाग्छ ।
अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र भन्न मन लागेको कुरा केहि बाकी छ कि ?
- अन्तिम भन्नू पर्दा हामी जहाँ छौ जुन बिधामा कलम चलाइरहेको छौ त्यही बाट साहित्यको बिकासमा लागि परौ । यो र त्यो भनेर विवाद निकाल्नु भन्दा सबैले सहकार्य गर्दै अघि बढौ ।
बिहिवार, फाल्गुन ९, २०७५, ११:०२:००
हार्दिक बधाई सरु गुरुआमा ! - वृक्षा बास्तोला
काभ्रेकी तारा तामाङलाई पराक्रम बालप्रतिभा पुुरस्कार
अनेसास कोरिया च्याप्टरको पाँचौ अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रमोद सारंग
एघार कविका ११० कविता :'उज्यालोका मालीहरू' सार्वजनिक
फाल्गुन १०, २०७६ मनु बिद्राेही
चस्मा (बालकविता) – रमेशचन्द्र घिमिरे
फाल्गुन ६, २०७६ मनु बिद्राेही